गलकोटमा ढल निकास बन्दै::Online News Portal from State No. 4
गलकोटमा ढल निकास बन्दै
फोहोरलाई मोहर बनाउने गनपाको योजना भने अधुरै
बागलुङ, २७ असार – गलकोट नगरपालिकाले बजार क्षेत्रको सफाईका लागि दैनिक फोहोर उठाउने, नाली निर्माण र ढल निकासको काम थालेको छ । मुख्य बजार रहेको वडा नं. ३ हटिया बजार आसपासमा संरचना समेत बनाएर सफाईका कार्यक्रम थालिएको हो । आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ मा प्रदेश सरकारले दिएको २६ लाख रुपैयाँ र नगरपालिकाको बजेट समेत मिलाएर ढल निकासको काम गरिएको उपप्रमुख रेणुका काउचाले बताईन् ।
मध्यपहाडी लोकमार्ग बाहेकका बजार र गल्लीमा ढल निकास नभएपछि फोहोर बढेको थियो । चालु बर्ष जिपपार्क क्षेत्रमा ढल निकासका लागि संरचना निर्माण भैसकेको वडा अध्यक्ष बीरजंग भण्डारीले बताए । ‘बजार क्षेत्र हिलाम्मे हुने अबस्थालाई हटाउन यो ढल निकासले सहयोग गरेको छ’ भण्डारीले भने, ‘बस्ती बढेका स्थानमा निरन्तर ढल निकास र सरसफाईका अभियान चलाउनु पर्छ ।’ हटियाको जिपपार्कबाट गौदीखोलामा ढल निकास गर्नका लागि हिमपाईप बिच्छाउने काम पनि शुरु भएको छ । हटियाको जिपपार्कदेखि गौदीखोला सम्मको ६५ मीटर हिमपाईप बिच्छाएर ढलको व्यवस्थापन गर्न लागिएको हो । अहिलेसम्म २५ वटा हिमपाईप राखिसकिएको श्रेष्ठले बताए ।
असार मसान्तसम्म काम सक्ने गरी नाली निर्माण र ढल निकासको काम भैरहेको हो । मध्यपहाडी लोकमार्गको छेउबाट लैजानु पर्ने भएकाले भूमिगत रुपमा ढल निर्माण गरेको भण्डारीले बताए । त्यसका लागि एकतर्फी सडक अवरुद्ध गरेर काम समेत गर्नु परेको थियो । छिटो काम सक्न रातको समयमा पनि काम गरिएको हो । नाली निर्माण र ढल निकासले बजारको सफाइमा सहयोग पुगेको स्थानीय बासिन्दाले बताए ।
यसैबीच फोहोरलाई मोहोर बनाउने भन्ने गलकोट नगरपालिकको योजना भने पुरा हुन सकेको छैन । निर्वाचित भएपछि नगरप्रमुख भरत शर्मा गैह्रेले फोहोरबाट मोहोर बनाउने नारा लगाएका थिए । उनले फोहोर प्रशोधन केन्द्र बनाएर नगर सफाई तथा युवालाई रोजगार दिने योजना अगाडि सारेपनि जग्गा अभावमा काम अलपत्र परेको बताए । डम्पिङ साइटको साटो कम्पोष्ट मल बनाउने र प्लाष्टिक जन्य फोहोर प्रशोधन गरेर पुन प्रयोगका सामाग्री बनाउने उद्योग संचालन गर्ने उनको लक्ष थियो । सिसालाई समेत छुट्टै व्यवस्थापन गर्ने उनले घोषणा गरेका थिए । उक्त घोषणा अनुसार केही तयारी समेत भएको उनले बताए । ‘काम गर्ने चाहना राखेरै योजना बनाएको हो, तर जग्गा पाउन मुस्किल भयो’ गैह्रेले भने, ‘जग्गा पाउनासाथ यो काम पुरा गर्छौ ।’
चौथो नगर परिषदले फोहोरमैला व्यवस्थापन बिधेयक २०७५ पारित गरिसकेको छ । यो बिधेयकले फोहोर व्यवस्थापनका लागि नीजि तथा सहकारी क्षेत्रलाई समेत दिन सकिने प्रावधान राखेको छ । केही सहकारी र नीजि क्षेत्रलेपनि चासो राखेकोले यो बिधेयकले व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने उनले बताए । सार्वजनिक जमिन नभएकोले व्यक्तिको जग्गा खरिद गर्न खोज्दा आएका अवरोध हटाएर काम गरिने उनले बताए । हालै जारी गरेको बजेटमा नगरपालिकाको भवन निर्माणका लागि जग्गा खरिद गर्न २ करोड बजेट बिनियोजन गरिएको छ । नगरपालिकाले एक बर्ष अघिदेखि स्थानीय गौंदीखोला र दरमखोला सफाई अभियान थालिसकेको थियो । ट्रयाक्टर खरिद गरेर दैनिक फोहोर उठाउने काम पनि नगरपालिकाले गरिरहेको छ । सफाइकै लागि मुसुरोबारी भन्ने स्थानमा नगरपालिकाले केही जग्गा खरिद गरिसकेको छ ।